iHorror Inozivisa Mwedzi-Yakareba LGBTQ Horror Pride Kupemberera kwaJune - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau iHorror Inozivisa Mwedzi-Yakareba LGBTQ Horror Pride Kupemberera kwaJune
iHorror Inozivisa Mwedzi-Yakareba LGBTQ Horror Pride Kupemberera kwaJune
by Waylon Jordan Dai 29, 2018
yakanyorwa na Waylon Jordan Dai 29, 2018
Hei vanotyisa vateveri, sevazhinji venyu munoziva, Chikumi Mwedzi wekuzvikudza pano muAmerica (zvisinei nezvinoitwa neHurumende yazvino) uye isu pano kuHorror tine chimwe chinhu chakarongwa.
Kutanga June 1, kuwedzera kune yedu yakajairwa inotyisa nhau kufukidza, tichave tichimhanyisa nhevedzano yezvinyorwa zvinopemberera nharaunda yeLBBTQ nekubatanidzwa kwavo mukubatsira kuita kuti mhando ive huru.
Inodaidzwa kuti Horror Pride Mwedzi uye isu tinofara kugovana zvimwe zvinonakidza zvemukati newe.
iHorror CEO, Anthony Pernicka akataura izvi paakabvunzwa kuti sei aifunga kuti dzakateedzana seizvi dzakakosha:
"Zvinoita sekunge tiri kutumira meseji kune wechidiki kwandiri: mwana akanyarara, asina kugadzikana, ngochani asina kumbonzwa kunge aive chikamu chevanhu." Ndiwo mukana wekumupa nyaradzo. Mwana iyeye aikwezvwa nekuvhunduka nekuti nenzira inotyisa inomiririra manzwiro aanoita. Kune rima, kusingaenderane, mupanduki wenyika yevaraidzo. Nekudaro, dzimwe nguva zvaiita senge kunyangwe mune anotyisa mhando yaaifanira kuviga. Zvinotyisa zvinogona kunge zvakanyanya hyper masculine uye zvakazadzwa neT & A. Zvinoita kunge vakomana vanoona mabhaisikopo vanoita zvevamwe varume pamberi pekutarisana nechinhu chinovatyisa. Simba iri rinogona kuita kuti gay anotyisa fan anzwe kunge munhu wekunze mune genre iro rinofanirwa kutambira vekunze. Ndosaka kuve neakateedzana seichi kwakakosha. Ino vhenekera mwenje munharaunda yevanhurume inoda kutyisa uye iri kuwedzera kukosha kune iyo genre. Zvinoita kuti wekunze azive kuti vanogamuchirwa mukirabhu iyi. Mukuvhunduka, vapanduki vese vane pekugara. ”
Kune avo vasingazvizive, nharaunda yenharaunda yave ichive nechekuita nekutya mafirimu kubva pakutanga.
Tora semuenzaniso James Whale. Iye director wezvinotyisa zvekare senge Frankenstein, Mwenga waFrankenstein, uye Iye murume Asingaonekwe, anga ari murume ngochani aigara zvake pachena, chimwe chinhu chisinga nzwiwe mukutanga kwezana ramakore rechi20 pazvaive zvisiri pamutemo kuva gayari.
Kunyangwe hupenyu hwake hwapera zvinorwadza nekuzviuraya, Whale akasiya nhaka yemafirimu ayo achiri kuverengerwa pakati peakanyanya kunaka akaitwa mumhando iyi.
Whale anongova mumwe wevanyori vazhinji, vatungamiriri, vatambi, vanyori, mafirimu, nezvimwewo vachazopihwa mucherechedzo mukati memwedzi weHorror Pride. Tichave tichikuunzirai hurukuro yekubvunzana nevazhinji veava vane tarenda maartist tichikurukura nyaya dzekuonekwa mune zvakanyanya kutyisa kuburitswa pamwe nevagadziri vemafirimu vari kugadzirisa zvinhu nemumiriri.
Kana nhepfenyuro iyi iine chirevo cheumishinari, chingave ichi: Kujekesa kwakakosha uye kuenderera mberi mipiro yenharaunda yeLBBTQ kune iyo inotyisa mhando panguva imwe chete ichirega vese vadiki vanotyisa vateveri vanogona kunge vari kungobuda kuti havasi voga munyika ino. Kudzokorora manzwiro emukuru wedu, pane nyika yese yevanotyisa vateveri uye vagadziri kunze uko, uye une imba pano kuHorror.
Nekudaro, kune vese vateveri vedu munharaunda yeLBBTQ NESU vatinoshanda navo, ramba wakatarisana! Horror Pride Mwedzi ichave iri yeropa nguva yakanaka!
Unotyisa Mwedzi UnodadaJames WhaleLGBTQQueer ZvinotyisaWaylon Jordan
Andrew Lincoln Anoisa Rick Grimes Kuzorora mu "The Walking Dead" Mwaka 9
Exclusive: Adam Steigert's 'Fang' Premieres Trailer yeMwedzi Uzere